MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး Lucky Draw
MPT မှချစ်ခင်လေးစားရပါသော သုံးစွဲသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် “ ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Money နဲ့မြူး” Lucky Draw အစီအစဉ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Channelကနေ ၁၀၀၀ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး ငွေသား(၁၀)သိန်းဆုကြီးများအပါအဝင် အခြားငွေသား (၁)သိန်းဆုပေါင်းများစွာကို ကံစမ်းရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဒါ့ကြောင့် MPTနဲ့အတူအခုပဲ ကံစမ်းလိုက်ရအောင်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း (MPT Moneyနှင့်MPT4U မှလွဲ၍)
ကံစမ်းခွင့်များ(E top-up/ DMS/SDP စသည်တို့မှတစ်ဆင့်)
MPT Money မှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း
ငွေဖြည့်ရမည့်ပမာဏ(ကျပ်) ကံစမ်းခွင့်များ(USSD Channel မှတဆင့်)
<၁၀၀၀ ကျပ် –
၁၀၀၀ ~၁၉၉၉ ကျပ် (၅) ကြိမ်
၂၀၀၀ – ၂၉၉၉ ကျပ် (၁၀) ကြိမ်
၃၀၀၀ -၃၉၉၉ ကျပ် (၁၅) ကြိမ်
၄၀၀၀-၄၉၉၉ ကျပ် (၂၀) ကြိမ်
၅၀၀၀-၅၉၉၉ ကျပ် (၂၅) ကြိမ်
၆၀၀၀-၆၉၉၉ ကျပ် (၃၀) ကြိမ်
၇၀၀၀-၇၉၉၉ ကျပ် (၃၅) ကြိမ်
၈၀၀၀-၈၉၉၉ ကျပ် (၄၀) ကြိမ်
၉၀၀၀-၉၉၉၉ ကျပ် (၄၅) ကြိမ်
၁၀၀၀၀-၁၉၉၉၉ ကျပ် (၅၀) ကြိမ်
၂၀၀၀၀-၂၉၉၉၉ ကျပ် (၁၀၀) ကြိမ်
၃၀၀၀၀ ကျပ် (၁၀၀) ကြိမ်
၁။ "ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်က ဘာပါလဲ?
“ ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ဆိုတာ MPT မှ MPT GSM/WCDMA Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် Channel (USSD/ E-Topup/DMS/ SDP/MPT4U / Mobile Money) ဖြင့် မဆို ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ MPT Money ငွေသားဆုလက်ဆောင်များစွာကို ကံထူးရန် ကံစမ်းခွင့်များရရှိနိုင်မှာပါ။ ဖုန်းဘေလ်များများဖြည့်တိုင်း ကံစမ်းခွင့်များများရရှိနိုင်ပါတယ
၂။ "ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ?
၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ MPT Money ကျပ် ၁ သိန်း နှင့် ကျပ် ၁၀သိန်း ဆုပေါင်းများစွာ အပတ်စဉ် ကံထူးနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် MPT4U တွင် ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူ၍ အမျိုးမျိုးသော ထိပေါက်ဂိမ်းကံစမ်းခွင့်များ မှတစ်ဆင့် ဒေတာဆုကြီးပေါင်းများစွာနှင့် ထောဘီဖုန်းဘေလ် အဆပေါင်း ၁၀၀ အထိ ကံစမ်းနိုင်မှာပါ။
၄။ MPT Money ဆုကံထူးခဲ့ပါက ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မှာလဲ။
MPTအနေဖြင့် ဆုကံထူးရှင်များအား MPT၏ တရားဝင် Facebook Pageမှ တစ်ဆင့်ကြေညာ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကံထူးရှင်များအား ကံစမ်းထားသော အပတ်၏နောက် ၂ပတ်မြောက် အပတ် စနေနေ့တွင်ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ဥပမာ – မေလ ၃၁ရက် မှ ဇွန်လ ၆ရက် အတွင်း ကံစမ်းထားမှုများအတွက် ကံထူးသူများအား ဇွန်လ၂၀ရက်တွင်ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအား MPTမှ ဆက်သွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။
၅။ Base Tariff အသုံးပြုသူများ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ Base Tariff အသုံးပြုသူများလည်း ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဖုန်းငွေဖြည့်လျှင် ကံထူးနိုင်သည့် ဆုများကိုသာ ကံစမ်းခွင့် ရရှိမှာပါ။
၆။ ၃၀၀၀ကျပ် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ထားပါတယ်။ ကံစမ်းခွင့် (၁) ကြိမ်ပဲ ရမှာလား?
မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းတဲ့ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး ဆုများရရှိရန် ကံစမ်းခွင့်အကြိမ်များ ရရှိမှာပါ။
ဖုန်းဘေလ်ပမာဏ (ကျပ်) ကံစမ်းခွင့်
(USSD မှ တစ်ဆင့်) ကံစမ်းခွင့်
(E top-up/DMS/SDP စသည်တို့မှ တစ်ဆင့် ကံစမ်းခွင့်
(Mobile Money မှ တစ်ဆင့်)
၁၀၀၀ – ၁၉၉၉ ကျပ် (၁) ကြိမ် (၂) ကြိမ် (၅) ကြိမ်
၂၀၀၀-၂၉၉၉ ကျပ် (၂)ကြိမ် (၄)ကြိမ် (၁၀) ကြိမ်
၃၀၀၀ – ၃၉၉၉ ကျပ် (၃) ကြိမ် (၆) ကြိမ် (၁၅) ကြိမ်
၄၀၀၀-၄၉၉၉ ကျပ် (၄) ကြိမ် (၈)ကြိမ် (၂၀) ကြိမ်
၅၀၀၀ – ၅၉၉၉ ကျပ် (၅) ကြိမ် (၁၀) ကြိမ် (၂၅) ကြိမ်
၆၀၀၀-၆၉၉၉ ကျပ် (၆)ကြိမ် (၁၂)ကြိမ် (၃၀) ကြိမ်
၇၀၀၀-၇၉၉၉ ကျပ် (၇)ကြိမ် (၁၄)ကြိမ် (၃၅) ကြိမ်
၈၀၀၀-၈၉၉၉ ကျပ် (၈)ကြိမ် (၁၆)ကြိမ် (၄၀) ကြိမ်
၉၀၀၀-၉၉၉၉ ကျပ် (၉)ကြိမ် (၁၈)ကြိမ် (၄၅) ကြိမ်
၁၀၀၀၀-၁၉,၉၉၉ ကျပ် (၁၀)ကြိမ် (၂၀)ကြိမ် (၅၀) ကြိမ်
၂၀၀၀၀ ~ ၂၉,၉၉၉ ကျပ် (၂၀) ကြိမ် (၄၀) ကြိမ် (၁၀၀) ကြိမ်
၃၀,၀၀၀ ကျပ် (၃၀) ကြိမ် (၆၀) ကြိမ် (၁၀၀) ကြိမ်
၃၀၀၀၀ ~ ၃၉,၉၉၉ ကျပ် (၃၀) ကြိမ် (၆၀) ကြိမ် –
၄၀၀၀၀ ~ ၄၉,၉၉၉ ကျပ် (၄၀) ကြိမ် (၈၀) ကြိမ် –
၅၀၀၀၀ ~ ၅၉,၉၉၉ ကျပ် (၅၀) ကြိမ် (၁၀၀) ကြိမ် –
၆၀၀၀၀ ~ ၆၉,၉၉၉ ကျပ် (၆၀) ကြိမ် (၁၂၀) ကြိမ် –
၇၀၀၀၀ ~ ၇၉,၉၉၉ ကျပ် (၇၀) ကြိမ် (၁၄၀) ကြိမ် –
၈၀၀၀၀ ~ ၈၉,၉၉၉ ကျပ် (၈၀) ကြိမ် (၁၆၀) ကြိမ် –
၉၀၀၀၀ ~ ၉၉,၉၉၉ ကျပ် (၉၀) ကြိမ် (၁၈၀) ကြိမ် –
၁၀၀၀၀ကျပ်နှင့်အထက် ဖြည့်တိုင်း (၁၀၀) ကြိမ် (၂၀၀) ကြိမ် –
ဖုန်းဘေလ်များများဖြည့်တိုင်း ဆုများရရှိရန် ကံထူးခွင့်များ ပိုပြီးရရှိနိုင်မှာပါ။
၇။ MPT4U ကနေ ဖုန်းငွေဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကံစမ်းခွင့်များ ဘယ်လိုရှိပါမလဲ။
MPT Money ကျပ် (၁၀) သိန်း ဆု ၁၀ ဉီး
MPT Money ကျပ် (၁) သိန်း ဆု ၅၀ ဉီး
၉။ ဖုန်းဘေလ် (၁၀၀၀) ကို USSD Channel မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ကို MPT4U မှ ထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ ရရှိသော ကံစမ်းခွင့်များမှာ ပေါင်းစည်းသွားမှာပါလား။
၁၀။ E topup ဖြင့် ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ဖြည့်ပြီး ကံစမ်းခွင့်(၆)ကြိမ် ရရှိထားပါတယ်။ နောက်ထပ် MPT4U Channel မှ ဖုန်းဘေလ် (၁၀၀၀) ကျပ် ဖြည့်လိုက်ပြီး ကံစမ်းခွင့်ကို *224# ကို နှိပ်၍ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ စုစုပေါင်း ကံစမ်းခွင့်မှာ (၆) ကြိမ်သာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
MPT4U မှ ရသော ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်သည် ထိပေါက်ဂိမ်းကစားရန် ကံစမ်းခွင့်ဖြစ်ပြီး ထိပေါက်ဂိမ်းကစားပြီးနောက် ရရှိလာသော ကံစမ်းခွင့်များသည်သာ ဆုများ ကံစမ်းနိုင်ရန် ကံစမ်းခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကံစမ်းခွင့်များနှင့် E top-up မှ ရရှိထားသော ကံစမ်းခွင့် (၆) ကြိမ် ပေါင်းစည်း၍ စုစုပေါင်း ကံစမ်းခွင့်ကို စစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ငွေဖြည့်ကတ် မဟုတ်သော E top-up မှ ထပ်ပြီး ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ဖြည့်သွင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပါလဲ။
၁၂။ ရရှိထားသော chances များ၏ အရေအတွက်ကို ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်ပါမလဲ။
၁၃။ တစ်နေ့လျှင် မည်သည့်အကြိမ်ခန့် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်နိုင်ပါသလဲ။
၁၄။ MPT4U တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး Package ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ ရရှိသော ထိပေါက်ကံစမ်းခွင့်များ ပေါင်းစည်းသွားပါမည်လား။
၁၅။ ဖုန်းတစ်လုံးမှ အခြားဖုန်းတစ်လုံးသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးခြင်းသည် "ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးမည် ဆိုပါက ဖုန်းဘေလ်လက်ခံရရှိသူ သည် ကံစမ်းခွင့် ရရှိနိုင်ပါမည်။
၁၆။ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) သည် "ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) သည် “ ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် မပါဝင်နိုင်ပါ။
၁၇ ။ ထပ်မံတိုးမြှင့်ထားသောကံစမ်းမဲကာလက ဘယ်အထိလဲ?
ထပ်မံတိုးမြှင့်ထားသောကံစမ်းမဲကာလမှာ မေလ ၃၁ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာမီအချိန် အထိဖြစ်သည်။